Hasselblad True Zoom, ity no fitaovana vaovao ho an'ny Moto Z | Androidsis
Alfonso ny voankazo | | IFA, Motorola
Motorola Napetrany tamin'ny hena rehetra ny hena mba hampiavaka ny Moto Z azy amin'ny sisa. Ary miavaka izany ny zazalahy! Ary io terminal vaovao avy any Motorola sy Lenovo io ve dia miaraka amina andiana kojakoja azo ampidirina, ao anatin'izany Zoom marina, ny tena mahaliana indrindra.
Ary i Motorola dia nahazo fifanarahana fiaraha-miasa tamin'i Hasselblad, orinasa soedoà iray manokana amin'ny famokarana fakan-tsary sy kojakoja ho an'ny sary. Ny vokany? Fitaovana vaovao izay azoko antoka fa hahagaga anao. Aza adino ny anay fahatsapana voalohany taorian'ny fitsapana ny Moto Z tamin'ny Motomod Hasselblad True Zoom!
Miaraka amin'ny Hasselblad True Zoom dia hamadika ny Moto Z ho fakan-tsary nomerika ianao
Ny Hasselblad True Zoom dia fitaovana fanampiny izay miraikitra ao aorian'ny Moto Z amin'ny alàlan'ny a rafitra pin. Satria andriamby ny andaniny roa, mora ny manao azy, nefa tsy mila mampiasa hery. Ny fikitika an'io fitaovana io dia tena mahafinaritra ary mamoaka kalitao ary endrika tsara amin'ny alàlan'ny mason-kodiny rehetra.
Na dia be amin'ny vatany aza vita amin'ny aliminioma izy io, ny faritra izay hakanay ny telefaona dia misy sosona ABS henjana izay manamora tokoa ny fangejana ny telefaona, manakana azy tsy ho solafaka ary hanamora ny asa fakana sary.
Raisina an-tsaina izany Nidina an-tsena nandritra ny taona vitsivitsy i Hashelblad, antenaina fa manana ny toetra teknika tsara ny kojakoja True Zoom. Ary zazalahy ve manana an'izy ireo!
Hanombohana azy dia manana a 25 - 250mm solomaso jMiaraka amin'ny sensor 13 megapixel sy flash Xenon izay ahafahana misambotra tsara. Miaraka amin'ny spotlight F / 3.5 - 6.5 Mazava fa hitondra tena tsara ny telefaona rehefa maka sary amin'ny tontolo maivana. Izany dia tsy maintsy ampiana ny mety firaketana Horonan-tsary 1080p vahaolana sy zoom 10x optika, mihoatra ny ampy ny maka sary tonga lafatra na manao ahoana ny halaviran'ilay sary.
Efa ho hitanao tamin'ny sary mihetsika voalohany fa tena tsara ireo sary, na dia misy lafin-javatra iray izay tsy tiako aza. Ary izany ve no fanampin-javatra Tsy manana bateria manokana izy ka misintona ny bateria avy amin'ny Moto Z. Ary raha dinihina fa ilay maodely voasedra dia manana bateria 2.500 mAh, matahotra aho fa, eo am-piandrasana andrana fitsapana ho tonga hahita ny mety ho azy, heveriko fa handany ny bateriny amin'ny fomba mahavariana ity gadget ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Hasselblad True Zoom, ity no fitaovana manampy ny Moto Z ho lasa fakan-tsary niomerika